Hevitra MPANOHARIANA | Septambra 2007
Fanontaniana sy valiny
2007-09-22 @ 16:52 in Politika
Efa tsy fotoanan’ny propavandy intsony izao, mandika lalàna raha manao izany. Noho izany raha manoratra ireo fanontaniana sy valiny nataon’izay nirotsaka teto Antananarivo aho dia tsy afaka ny hiteny intsony hoe iza no namaly izany fa ny karazam-balinteny ihany no tsoahiko amin’izay novakiako.
Voalohany: tsy voatsimbina firy ny zo sy tombotsoan’ireo mpanjifa noho ny tsy fisian’ireo lalàna mifandraika amin’izany. Efa misy tolo-dalàna voavolavola momba izany. Inona no atolotrao mba hiarovana ny fahefa-mividy…?
Valiny:Hetra midangana ho an’ireo entana rendrarendra indrindra ny fiara ka antsoina hoe hetra sosialy ka ny olona mandray karama latsaky ny Ar100.000 isam-bolana no mandray fanampiana amin’ny alalan’io hetra io.Foanana ny hetra na ahena ho an’ny PPN amin’ny maitso ahitra.Ahena ny hetra aloan’ny tsirairay
Omena tany izay monina an-drenivohitra hambolena
Fanaraha-maso ireo orinasa vaventy mety manafin’entana.
Fampidirana tetibola hampihenana ny fidanganan’y vidim-piainana
Ampiharina tsy anavahana olona ny lalam-pifaninanana.
Nahoana no sady manondrana vary no hanafatra avy any ivelany ihany koa?Fampitomboana ny faritra volena
Fiofanana matetika ho an’ny tantsaha.
Loi contre le monopole
Loi contre les abus position dominante
Loi contre tous les abus
Fampiharana mazava ny lalànan’ny tolotra sy ny tinady
Fanontaniana: volavolan-dalàna 23/2007 manome fahalalahana tanteraka ny orinasa handray mpiasa vahiny araka izay ilaina; volavolan-dalàna 24/2007 ahafahana mampiasa ny vehivavy eny amin’ny toeram-pamokarana afakaba amin’ny alina sy tsy voafetra ny ora fanampiny. Ekenao ve ny hampiatoana ireo tolo-dalàna ireo fa iaraha-midinika kosa ny momba izany aloha? (mety ity no tsy namalina’ny sasany fanontaniana nefa metyho diso koa izany hevitro izany).
Valiny: Tokony ferana ny fahazoan’ny vahiny miasa eto. Tsy ekena ny tolo-dalàna tsy manome hasina ny mahaolona.
Efa misy ny malagasy manana fahalalàna sy ampy fahaizana ka ireny no atao lohalaharana aloha fa ny vahiny dia fanampiny fotsiny ihany.
Tsy ekeko ny hampihantonana ny fandinihana ireo tolo-dalàna ireo (iza io?)
Ny tolo-dalàna efa napetraka tsy azo ahantona intsony. Aleo hiadian-kevitra dia ahitsy tsikelikely izay tsy ekena.
Fanontaniana: inona no hatolotrao hahatonga ireo fitrandrahana ireny hitondra vokatsoa sy hiarovana ny tontolo iainana?
Valiny: Ny vondrom-bahoakam-paritra tsy maintsy omena ampahany ary omena alalana hanara-maso ny fitrandrahana.
Manam-pahataperana ny harena ankibon’ny tany, tsy tokony hirobaroba na maika aza.
Omena tamberim-bidy ny vondrom-bahoakam-paritra.
Tsy maintsy mifampiraharaha tsara ny fanjakana mba hahazoana ny vokatsoa betsaka amin’ny solitany, 50% farafaharatsiny.Ferana ny isan’ny mahazo mitrandraka.Tsy maintsy mamerina ny tany noesoriny ny mpitrandraka rehefa vita izay nataony.
Omena famatsim-bola ny mpitrandraka madinika
Atao mangarahara ny fifanarahana amin’ny orinasa vaventy.
Fananganana andrimasom-pirenena hanaramaso ny fivoahan’ny harena sy ny fidirany an’I Madagasikara.
Mangataka tatitra isanenimbolana (ohatra) amin’ny mpitondra ny vola azo amin’ny fitrandrahana vaventy.
Fanontaniana: Ilaina ve ny fampifandanjana ny isan’ny lahy sy ny vavy mirotsaka eo amin’ny sehatry ny fifidianana?
Valiny: Eny, ny lalàmpanorenana efa mamaritra ny fitovian-jo eo amin’ny lahy sy ny vavy.
Efa mitovy zo ny lahy sy ny vavy ka anjaran’ny tsirairay ny mandray safidy amin’izany.
Fanontaniana: Manoloana ny olona tsy sahy mijoro na dia tratran’ny tsy rariny aza. Ahoana ny fomba hiarovana ny olona tratran’ny tsidry hazolena?
Valiny: Omena mpisolovava maimaipoana izay sahy mijoro manohitra ny tsy rariny.
Ilaina hatsaraina mihitsy ny lalàna.
Lalàna hiarovana ny vavolombelona.
Fitsarana mahaleo tena tanteraka. Fampijoroana ny haute cours de justice.
Tokony hisy ny polisin’ny polisy.
Fanontaniana: Inona ny hataonao hampitomboana ny ambaindain’ny tantsaha hiatrehany ny fifaninanana iraisam-pirenena?
Valiny: foibe isam-paritra hakana torohay
Fanganana banky afaka hamatsy vola amin’ny taha tena ambany.
Izay miasa ny tany no tompony.
Fiarovana ny vokatry ny tantsaha.
Fanamorana ny fampisamboram-bola.
Tsy tokony ekena ny zavatra vita kitoatoa.
Fanontaniana: SADC, COMESA, COI…Inona no ataonao hanampianao ny orinasa hiatrika ny sehatra iraisam-pirenena, handraisany anjara amin’ny tsena iraisam-pirenena?
Valiny: Tsy ny orinasa rehetra no tokony atsangana eto fa izay afaka manome vokatra mora nefa manaja ny kalitao ary mifanaraka amin’ny zavamisy. Tokony iantohan’ny fanjakana ny fanamorana ny fametrahana ny tambazotram-pifandraisana, ny fifandraisan’ny mpandraharaha, indrindra ny mikasika ny fampiasana ny tranokalam-pifandraisana sy ny marketing.
Fanjakana tsara tantana aloha.
Fananganana orinasa madinika sy salatsalany.
Fandrindrana sy fandaminana ny sehatr’asam-pamokarana mba ho afaka hiara-miasa.
Dinihana tsara vao miditra vondrom-paritra iraisam-pirenena izany.
Fametrahana banque de données hahafantarana tsara ireo sehatra ireo. Politika manokana hiarovana ny mpandraharaha teratany.
Tsy hitanay izay soa mety ho azo amin’ny sadc sy comesa fa toa Sida sy ny fahantrana no tena entiny ho antsika.
Ekena kosa ny Coi satria mifameno amintsika ireo. Ahena ny zanabolan’ny banky. 211 bis sady famonoana orinasa no fanaovana kolikoly.
Aleo aloha ireo ihany fa ajanona hatreo. Amin’ny manaraka indray manao misimisy raha mbola mazoto.